0 Saturday September 21, 2019 - 06:48:19
Waa xubin joogta noqon doonta insha'Allaah oo si maalin leh ah uga baxda idaacadda Alfurqaan, xubinta waxaa lagusoo koobayaa dhaq dhaqaaqa ganacsiga dalka Soomaaliya.
0 Thursday September 19, 2019 - 09:00:57
0 Thursday September 19, 2019 - 08:09:00
Markii ugu horraysay ayaa lagu dhawaaqay mid kamida Afartii dekadood ee sanad ka hor uu Farmaajo siiyay dowlada Xabashida Itoobiya.
0 Thursday September 19, 2019 - 08:07:26
Wararka ka imaanaya gobolka Bari ayaa sheegaya in qarax khasaara dhimasho iyo dhaawac dhaliyay lala beegsaday ciidamo katirsan maamulka Puntland.
0 Thursday September 19, 2019 - 08:03:16
Sida ay wararku sheegayaan duqeyno xooggan ayaa maanta lagu qaaday saldhigyo melleteri oo ciidamada shisheeye iyo maleeshiyaadka dowladda Federaalka Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaan hoos yimaad degmada Afgooye.
0 Tuesday September 17, 2019 - 11:44:45
0 Tuesday September 17, 2019 - 07:05:11
0 Tuesday September 17, 2019 - 07:02:22
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si lama filaan ah u sheegay in dowladdiisu aysan difaaci karin nidaamka Aala Sacuud islamarkaana aanu diyaar u aheyn dagaal uu lagalo Iiraan.
0 Tuesday September 17, 2019 - 06:59:36
Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galguduud waxaa lagusoo gaba gabeeyay shir loogu magac daray dib uheshiisiinta Galmudug kaas oo ay soo qaban qaabisay dowladda Farmaajo.
0 Monday September 16, 2019 - 10:03:50
Dowladda Burundi ayaa xaqiijisay in darsan katirsan ciidamadeeda lagu dilay weerar dhabbagal ah oo xoogaga Al Shabaab ay horraantii isbuucaan ka fuliyeen meel dhan waqooyi uga beegan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
0 Monday September 16, 2019 - 09:54:45
Xaalad adag ayaa ka taagan magaalada Baardheere ee gobolka Gedo kadib markii ay duntay buundada weyn ee magaaladaasi.
Weerar hor leh oo ka dhacay bartamaha magaalada Muqdisho ayaa sababay dhimashada sarkaal katirsanaa ciidamada dowladda Federaalka ee Mareykanku tababaray.
0 Monday September 16, 2019 - 09:53:01
Ciidamada Burundi ayaa howlgal raaf ah oo dad badan lagu raafay ka fuliyay deegaanno hoos yimaad degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe.
0 Monday September 16, 2019 - 09:50:23
Tandiimka Qaacidatul Jihaad faraciisa dhulka Jaziiradda Carabta gaar ahaan Yemen iyo Maleeshiyaadka Shiicada Xuuthiyiinta ayaa wada gaaray Heshiis maxaabiis isweydaarsi ah.
0 Monday September 16, 2019 - 09:48:59
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qaraxyo khasaara dhaliyay oo saacadihii lasoo dhaafay lagu weeraray ciidamada shisheeyaha Burundi ee duullaanka ku jooga gobolka Sh/dhexe.
0 Saturday September 14, 2019 - 06:57:48
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar gaadma ah oo ciidamada shisheeyaha Burundi ku qabsaday deegaan katirsan gobolka Shabeellaha dhexe.
0 Saturday September 14, 2019 - 06:54:43
R/wasaaraha dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa si dirqi ah uga badbaaday isku day dil oo ladoonayay in lagu khaarijiyo.
0 Saturday September 14, 2019 - 06:41:39
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dilal qorshaysan oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay gudaha magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo.
0 Saturday September 14, 2019 - 06:36:52
Tuulada Ugunji ee Hoostagta Magaalada Janaalle ee gobalka shabeelaha Hoose ayaa shalay Galinkii Danbe waxaa Lagu qisaasay Usaama Maxamuud Macaani oo horay udilay xaaskiisa isagoo qoorta ka jaray.
0 Thursday September 12, 2019 - 07:10:23
Wilaayada Islaamiga ah ee Banaadir ayaa soo gabagabaysay mashruuca qaybinta Zakada iyadoo boqolaal qoys ay ka faa'iideysteen mashruucaasi.
0 Wednesday September 11, 2019 - 11:14:05
0 Wednesday September 11, 2019 - 08:11:33
Xarunta madaxtooyada Villa Somalia ee magaalada Muqdisho ayaa markale weerar madaafiic ah dharaar cad kala kulantay Al Shabaab.
0 Wednesday September 11, 2019 - 08:09:31
Malaayiin qof American ah ayaa maanta xusuusanaya murugadii ka gaartay weeraradiii dhacay 11 September ee sanaddii 2001 xilligaas oo Al Qaacidda ay beegsatay halbowlayaasha dhaqaalaha Mareykanka iyo xarunta wasaaradda difaaca.
0 Wednesday September 11, 2019 - 08:07:00
« Prev1234567 ... 209Next »